ग्रेटर नेपालको मु'द्धा उत्कर्षमा |रास्ट्र संघबाट नेपालि जनतालाइ अपिल |विश्वको समर्थन| इन्डियाको अबरोध (भिडियो हेर्नुहोस्) सेयर गराै -
Home News ग्रेटर नेपालको मु’द्धा उत्कर्षमा |रास्ट्र संघबाट नेपालि जनतालाइ अपिल |विश्वको समर्थन| इन्डियाको...
ग्रेटर नेपालको मु’द्धा उत्कर्षमा |रास्ट्र संघबाट नेपालि जनतालाइ अपिल |विश्वको समर्थन| इन्डियाको अबरोध (भिडियो हेर्नुहोस्) सेयर गराै
ग्रेटर नेपालको मु’द्धा उत्कर्षमा |रास्ट्र संघबाट नेपालि जनतालाइ अपिल |विश्वको समर्थन| इन्डियाको अबरोध (भिडियो हेर्नुहोस्)
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहले सूर्य चिन्हबाट चुनाव लड्न नपाउने दाबी गरेका छन् । आफ्नो समूह निकट ट्रेड यूनियन महासंघले बिहीबार राष्ट्रिय सभागृहमा गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले सूर्य चिन्हबाट चुनाव लड्न नपाएर दाहाल–नेपाललाई दशा लागेको बताए ।
कहिल्यै सूर्य चिन्हबाट चुनाव नलडेका दाहालले पार्टी विभाजनपछि सूर्य चिन्ह दाबी गर्न नमिल्ने ओलीको भनाइ छ ।
‘सूर्य चिन्ह बनाउने हामी, सूर्य चिन्ह दर्ता गर्ने हामी, जिन्दगीभर सूर्य चिन्हबाट चुनाव जित्ने हामी । एकपल्ट सूर्य चिन्हमा चुनाव नलडेको मान्छेले सूर्य चिन्ह मेरो हो भन्ने ? पार्टी छोडेपछि सूर्य चिन्ह ? पार्टीमा बस्दा त दिएकै थियो नि !’
ओलीले भने, ‘सूर्य चिन्हबाट चुनाव लड्न पाउनुहुन्थ्यो । दशा लागेपछि के लाग्छ । यही बसेको भए सानदार सफलता हुन्थ्यो । हेर दशा लागेको उहाँहरूलाई ! अब उहाँहरूले जित्नुहुन्छ चुनाव ?’
अहिले केही तत्वले मजदुरहरुलाई झुटा सपना देखाएको भन्दै ओलीले त्यस्ता तत्वबाट मुक्त हुन पनि आग्रह गरे । ‘अहिले पनि केही तत्वहरुले केही मजदुर साथीहरुलाई अलमलाएका छन् । झुटा सपना देखिएका छन्, त्यस्ता पक्षहरुबाट मुक्त हुनु होला । समाजवादी हुँ भन्न रुचाउने, मजदुरको नाम लिएर नथाक्ने तर विदेशीको चाकडी गरेर जहिले पनि आन्दोलनलाई गलत दिशामा लिएर जाने, कमजोर पार्ने तत्वहरु जो हामीबाट अहिले भर्खर गएका छन्, गएकै त होलान् । हामीले त अझै हटाएका छैनौं । उहाँहरु गएँ भन्दै हुनुहुन्छ,’ ओलीले भने ।
दाहाल–नेपाल समूह गएपछि पार्टीमा उत्साह बढेको ओलीको दाबी छ । ‘नेपालमा सबैभन्दा अनुशासित हाम्रो पार्टी थियो । आज अनुशासनहिन पार्टी भएको छ । किन टनटन दुखिराखेको छ भनेको त्यही पिलो रहेछ, निचोरिएर गयो । उहाँहरु जानु भयो । अहिले पार्टीमा उत्साह छ, आत्मविश्वास छ,’ ओलीले भने, ‘यस्तै चाल हो भने जनताको बिचमा के मुख देखाउन जाने, के भन्न जाने भन्ने समस्या ते तकालाई परेको छ । अहिले हाम्रो पार्टी अनुशासित छ ।’
Previous articleश्री’मानको क’र्तुत बारे भन्न मृ’तक २ वर्षे छोरी कि आमा रु’दै मिडियामा, सन्तोष र कमलाको प्रेमको अन्त्य (भिडियो हेर्नुहोस्)
Next articleश्री स्वस्थानी ब्रत कथा अध्याय – १…श्री स्वस्थानी ब्रत नेपाली महिलाहरूले गर्ने क’ठीन ब्रतको पर्व (ॐ लेखेर सेयर गराै)